Avelan’Andriamanitra Hisafidy ve Isika? | Fanontaniana Ara-baiboly
Kreôla any Guinée-Bissau
Efa Voalahatr’Andriamanitra ve ny Fiainantsika sa Isika no Misafidy?
Manaja antsika Andriamanitra ka avelany hisafidy isika. Tsy nandahatra mialoha izay hitranga eo amin’ny fiainantsika izy, fa isika no avelany hanapa-kevitra ny amin’izay tiantsika hatao. Diniho izay ampianarin’ny Baiboly.
Nataon’Andriamanitra tahaka ny endriny ny olombelona. (Genesisy 1:26) Baikoin’ny faniriany voajanahary ny biby, fa isika olombelona kosa afaka manahaka ny toetran’ny Mpamorona. Afaka maneho fitiavana sy manao ny rariny, ohatra, isika. Afaka misafidy toa an’ilay Mpamorona antsika koa isika.
Miankina amintsika ihany ny hoavintsika, amin’ny ankapobeny. Ampirisihin’ny Baiboly isika mba ‘hifidy ny fiainana ka hihaino ny feon’Andriamanitra’, izany hoe hifidy ny hankatò ny didiny. (Deoteronomia 30:19, 20) Tsy hisy dikany ireo teny ireo raha tsy afaka misafidy akory isika. Tena ratsy fanahy Andriamanitra raha izany. Tia antsika anefa izy ka tsy manery antsika hanaraka ny teniny. Hoy izy: “Raha mitandrina ny didiko tokoa mantsy ianao, dia ho toy ny renirano ny fiadananao.”—Isaia 48:18.
Tsy ny lahatra na ny anjara no mahatonga antsika hahomby na tsia. Tsy maintsy miezaka mafy isika raha te hahomby. Hoy ny Baiboly: “Izay rehetra azon’ny tananao atao dia ataovy amin’ny herinao manontolo.” (Mpitoriteny 9:10) Hoy koa izy io: “Ahazoan-tombony ny fandaminana mialoha ataon’ny mazoto.”—Ohabolana 21:5.
Tena sarobidy ny fahafahana misafidy nomen’Andriamanitra antsika. Noho izy io mantsy dia afaka mifidy ny ho tia azy ‘amin’ny fontsika manontolo’ isika.—Matio 22:37.
Fa angaha moa tsy Andriamanitra no mifehy ny zava-drehetra?
Marina aloha fa mampianatra ny Baiboly hoe Mahery Indrindra Andriamanitra, ary tsy misy afaka mifehy azy. (Joba 37:23; Isaia 40:26) Tsy ampiasainy hifehezana ny zava-drehetra anefa ny heriny. Milaza, ohatra, ny Baiboly fa “nifehy tena” Andriamanitra, fa tsy tonga dia nanasazy an’i Babylona fahiny, ilay fahavalon’ny vahoakany. (Isaia 42:14) Toy izany koa ankehitriny. Tsy tonga dia manasazy izy rehefa misy manao safidy ratsy mba hampijaliana ny hafa. Tsy handefitra mandrakizay anefa izy.—Salamo 37:10, 11.
Misy Heriny eo Amin’ny Fiainanao ve ny Kintana?
Maro no mitady torohevitra sy tari-dalana amin’ny mpanandro. Tena misy heriny eo amin’ny fiainantsika ve ny kintana?
Efa Voalahatra ve ny Fotoana Ahafatesantsika?
Nahoana ny Baiboly no milaza hoe “ao ny andro ahafatesana”?
Te Hifandray Aminao Izy
Inona no azonao atao raha mino an’Andriamanitra ianao nefa tsy mahatsiaro ho akaiky azy?
Inona no ataon’ny Devoly mba hifehezana ny olona, ary inona no tokony hataontsika raha tsy te ho voafandriny isika?
Mampianatra Momba ny Andriamanitra Telo Izay Iray ve ny Baiboly?
Mipetraka any Amin’ny Toerana Iray ve Andriamanitra?
Jesosy ve no Anaran’Andriamanitra?
Tena Misy ve Andriamanitra?